किन यूरोपले यो कुरा गर्छ कि उर्दू मुश्किल छ तर नयाँ हिटलर: मार्टिन भिजल्याण्डसँग गोपनीय रूपमा सहयोग गर्छ
द्वितीय विश्वयुद्ध अघि हामीले जर्मन अर्थव्यवस्थामा ठूलो पुनरुत्थान देख्यौं। एडल्फल्फ हिटलरले पूर्ण उद्योग निर्माण गरे र पूर्वाधार निर्माणमा सुधार भएको थियो। यसले जर्मनीमा ठूलो आर्थिक बिरोधको कारण बनायो, जुन त्यतिबेला सम्म धेरै धेरै नै भयो दोहोरो पहिलो विश्व युद्ध पछि। आर्थिक पुनरुत्थानले एडल्फ हिटलरलाई आफ्नो विचार भन्दा बढी सम्भवतः लोकप्रिय बनायो, तर वास्तवमा यो एक संयोजन थियो। हटलरले आफैंलाई राम्ररि बेच्न सकेन कि उनीहरुले उनीहरुका सम्पूर्ण पकडहरुमा पूर्णतया पक्कै भोगेका थिए। लामो समयअघि हामी टर्कीको राष्ट्रपति उर्दूलाई अर्को देख्यौं उल्लेख गर्दै एडल्फ हिटलर को प्रशासनिक प्रणाली, कथित भन्दा उहाँले एडल्फ हिटलर प्रशंसा गर्न अभिप्रेरित, बरु रूपमा लामो रूपमा दुरुपयोग छैन धेरै प्रभावकारी हुनेछ भन्ने तानाशाही प्रणाली उल्लेख जसमा। एक तानाशाही प्रणालीको सन्दर्भमा र उदाहरणको रूपमा हिटलरको प्रणालीलाई उद्धृत गर्दै, कम से कम एक उल्लेखनीय छनोट भनिन्छ। तर म एडल्फ हिटलर संग 1 कोर्नु शेविंग बारेमा म Erdogan वा म टर्की तिर एक शत्रुतापूर्ण मनोवृत्ति छ र यसरी अन्य कुनै पनि पार्टी को लागि पार्टी आकर्षित कि छाप छोड्न छैन। उर्दूको लागि आलोचनात्मक अर्थ भनेको होइन कि म एक पार्टीको छनौट गर्दछु, उदाहरणका लागि, कुर्द या रूस वा अरू कसैको।
त्यहाँ कुनै गलत गल्ती गरौं कि म यो प्रस्ताव गर्छु कि वर्तमान युद्ध युद्धमा भएका सबै पक्षहरू एउटै एजेन्डाको अंश हुन्। टर्कीका पाठकहरूको लागि विश्व स्टेजमा के छ भनेर जान्न कठिन छ। तिनीहरूका लागि यो विशेष गरी गाह्रो छ, त्यसैले यो वास्तविक तस्वीर हेर्न लाग्दछ। यदि हामीले अन्तिम शताब्दीको इतिहास संक्षेपमा संक्षिप्त गर्यौं भने हामी के देख्न सक्छौं? त्यसोभए हामी नाजी जर्मनीको साथ पनि अन्य सशक्त शक्तिको रुपमा सियोनस्ट्रिजको पैसा संग वित्त पोषित भएको थियो। हह? एक धारणा को लागी के हो? अनुसन्धानमा गम्भीर रूपमा लिनुहोस्। त्यसपछि तपाइँ चाँडै पत्ता लगाउनुहुनेछ बुश परिवार उदाहरणका लागि, एडल्फल हिटलरको कोषमा। जब हामी प्रथम विश्व युद्धमा हेर्छौं, हामी देख्न सक्छौं कि रूसी जाजर सियोनवादी मुद्राबाट निस्किएको थियो र लेनिन द्वारा प्रतिस्थापित भयो। त्यस आदेश को केहि चीन मा पनि भयो। म अब यहाँ धेरै धेरै खुसी गर्न जाँदै छु, तर म निश्चित रूपमा फिर्ता आउनेछु।
यदि हामी सामान्यतया देशका राष्ट्रपतिहरूका बारेमा बोल्छौं, त्यसपछि त्यहाँ एक छाया सरकार पछि पछाडी साँच्चै नियन्त्रण लिन सकिन्छ। राजनैतिक शो र कार्यान्वयन राम्रा प्रशिक्षित बिक्रेता व्यक्तिहरूलाई छोडिन्छ, जुन राजनीतिज्ञ भनिन्छ। विक्रय प्रबन्धकले शीर्षक अध्यक्ष बन्छ।
अनि सीरियाको बिरसार अल-एर जस्तै नेताहरूको बारेमा? के यो पनि नियन्त्रण गर्दछ? यदि तपाईं इतिहासमा साँच्चै विसर्जन गर्न समस्यालाई लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि धेरै इतिहास झूटाकरण भएको छ। भित्री खूनहरू वास्तवमा सबै फस्री सन्तान हुन्। त्यसोभए Assad पनि। तपाईं यो प्रतीकत्व द्वारा पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ जुन तिनीहरू सामान्यतया लिन्छन्। प्रत्येक र त्यसपछि तिनीहरू चरणका लागि दृश्यहरू सेट गर्थे। त्यो विभाजन र विजयको रणनीतिको भाग हो। दृश्यहरू पछि यी झगडाहरू अवस्थित छैनन् र उनीहरू मुख्य रूपमा युद्धका लागि मजदूरी गर्न सक्षम छन्, जसको साथ तिनीहरूले 'अर्डरबाट अर्डर' को आफ्नो एजेन्डा पूरा गर्न सक्छन्। यो धेरै रोचक छ कि मानिसहरु कसरी आर्थिक समृद्धि र समृद्धि ल्याउन लागेका महान् नेताको लागि पछाडि सजिलै मान्छेहरूको परीक्षामा परेका छन्। यो यस्तो नेताको हानिकारक मूडमा अन्धकारकारी असर देखिन्छ। यसको अतिरिक्त, यी नेताहरु पनि स्मार्ट हो, किनकी उनीहरूले आफ्नो हातमा मिडिया छ भने, उनीहरुले पुरा तरिकाले निर्धारित गर्न सक्दछन् कि किन सीमाको अर्को पक्षमा कि कष्टप्रद दुश्मनका मान्छेहरु बीचको तस्वीर सिर्जना गरिन्छ। तिनीहरूसँग सम्भावनाहरूको विस्तृत दायरामा पहुँच छ। यसैले तिनीहरूले झूटो झण्डा अपरेशन चलाउन वा चीजहरू पुरा गर्न सक्दछन् र मान्छे को बीचमा दुश्मन छवि को उत्तेजित गर्न को लागी। र यसले आतंकवादको निम्ति सही रसायन विज्ञान दिन्छ। र त्यो वास्तवमा लक्ष्य हो।
ठूलो नेता सबै आफ्नो ठूलो महलों छन् (जो उनि धेरै आर्थिक समृद्धि चिन्ता किनभने, पाठ्यक्रम, तिनीहरूले योग्य, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई जो प्रदान) र आफ्नो प्रचार मिसिन मार्फत छोड्न कारण freshened राष्ट्रवादी गर्व र धार्मिक खाना पकाउने मान्छे को रगत दोषी
टर्कीका नेता उर्दूहरू सबै अन्य विश्वका नेताहरू जस्तै, आर्यवादको भाग हो; उनीहरुसँगको सम्बन्धमा उनीहरुसँग भेटघाट गरेकी छिन्। उहाँ सियोनस्ट्री ड्रग पैसाको साथ वित्त पोषण गर्नुहुन्छ (पढ्न मेरो ईबुक) Fetullah Gülen मार्फत। Gulen संग (स्पष्ट) ब्रेक मार्फत Yasin अल-Qadi, साउदी बैंकर अल Qaeda र आईएसआईएस को र वित्तीय (Zionist कठपुतली को Balfour 1917 मा घोषणा देखि राज्य) अब कोष चल्छ पछि। उर्दूले टर्कीका मानिसहरूलाई सोजीलाई संघर्ष र रक्तपातको औचित्य प्रदान गर्दछ। सबै भन्दा ठूलो सउज जसले उर्दू टर्कीका मानिसहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ तुर्क साम्राज्यको बहाली हो। उनीहरूले यो गर्न सक्थे किनकि उसले देशलाई ईश्वरवादी मुद्रा-उधारदाताओंबाट आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकेको थियो। म सियोनवादी रूपमा भन्न चाहन्छु, किनभने पैसा अन्ततः एउटै ट्यूबबाट आउँछ। एक समय सीआईए ग्लेन को माध्यम ले र अब देश को माध्यम ले एक पल्ट ओटोमन साम्राज्य को दौडने मा मदद को ब्रिटिश र फ्रेंच देखि दूर; सउदी अरब। इब्न सैद को 1917 को आसपास को वित्त पोषित भएको थियो को लागी अरब प्रायद्वीप को पश्चिमी अमीरात को सानो सानो। इब्न Saoud एक इनाम र crowns आफूलाई राजाको रूपमा सम्पूर्ण साउदी अरब प्रायद्वीप रूपमा, इस्राएलका राज्य स्थापना गर्नु अघि प्यालेस्टाइनमा आरक्षण भूमि योजना अपनाउने गर्न सहमत भए।
तर सबै अन्य शिविर बस घुसपैठको रूपमा छन्। यो तिनीहरूको (र 'तिनीहरूको' उद्देश्य म 'आरिस्टोसीसी' मा जान्छ) कि राष्ट्र राष्ट्र र धर्मको आधारमा एक अर्काको साथ लड्छ। दृश्यहरू तिनीहरू तिनीहरूका साथीहरू पछि (परिवार पढ्नुहोस्, उनीहरूको फारानोनिक रक्तलाइनहरूमार्फत)। तिनीहरू विभाजन र शासन र 'Ordo ab Chao' को एजेन्डा दौडिरहेका छन्। यो 33 ग्रेड स्काट्स्की फ्रिमेसोसोरीको शब्द हो जसले यसको नाम मिस्र फुकुनिस रानी स्कटामा गर्छ।
यो स्पष्ट छलफलहरू हामी युरोपेली नेताहरूले बीच मिडिया मा यूएस र शरणार्थीका लागि टर्की गर्न6अर्ब बारेमा स्पष्ट छलफलमा टर्की गरेको अभिवृद्धि बारे देख्न, जस्तै शरणार्थी बारे छलफल र सेन्जेन सम्झौता को कार्यान्वयन रूपमा स्पष्ट छन्। अज्ञात योजनाका महिलाहरु र सज्जनहरु सबै भन्दा अगाडि यो योजना धेरै योजना बनाएको छ। क्यामेराको अगाडि छलफलहरू मानिसहरूको छविको लागि मात्र प्रोप्रान्डा हुन्; फेरि विभाजित र विजयको सन्दर्भमा। मासुको आँखामा चिसोको एक चिसो चिसो हुन्छ। राष्ट्रपतियों, दौडहरु र धर्महरु एकदमै बालों मा उडान गर्न पर्छ। र अभिजात वर्ग को महिलाहरु र सज्जनहरु आफ्नो महलों हेर्नुहोस् अल्लाह, येशू, राष्ट्रियता, नस्ल वा ठूलो र शक्तिशाली साम्राज्य को आषा प्रत्याशा को नाम मा हरेक अन्य हत्या आफ्नो दास कसरी। यूगोस्लाभ युद्ध नेनिनेटहरूमा स्थापित भएको थियो जब विभाजन र शासन को खेल राम्रो तरिकाले निष्पादित गरियो र अझै पनि त्यहि तरिका मा लागू हुन्छ। वृत्तचित्र 'चेन चेन्ज' मा तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि कसरी मीडिया को नेताहरु लाई राजनैतिक नेताहरु को झूठ बोल्न को लागी प्रयोग गरिएको थियो र विभाजन र नियम को खेल कसरि व्यवहार गर्दछ।
हामीलाई नबिर्सनुहोस् कि युरोप नाजी विचारहरू पूर्ण रूपमा आधारित छ। को Bilderberg समूह लेट नाजी राजकुमार Bernhard र वाल्टर Hallstein, 1958 1967 गर्न युरोपेली आयोग को नाजी कानुनी संरक्षक को समाज र राष्ट्रपति को एक सदस्य द्वारा स्थापित भएको थियो। यसको बारेमा थप पढ्नुहोस् यो किताब शीर्षक 'रिले लाइफ' संग। ईजिप्टवाद र सियोनवादको साम्राज्यवादी शाखा भन्दा अरु केही पनि होइन, फलामको आर्यवादको राजनीतिक एजेन्डा भन्दा बढी छैन। वास्तवमा, हामी भन्न सक्छौं कि विश्वव्यापी शतरंजका सबै पक्षहरूले यो नाजुक र सियोनवादको हेरचाह र यस प्रकारको कलाको हेरचाह गर्दै छन्। उनीहरूले सजिलै विश्व संसार स्थापना गर्न सक्छन्। उनीहरूको लागि ती सबै युद्धहरूको आवश्यकता छैन। युद्धहरू आवश्यक छन् किनकि तिनीहरू रगत हेर्न चाहन्छन्। यो विशुद्ध र केवल आफ्नो bloodlines र demigods को आनुवंशिक मूल संग गर्नुपर्छ। तिनीहरू रक्तपातकारी राक्षस हुन् जसले महल र जनहरूमा लुकाउने र धोका मार्फत एक-अर्काको विरुद्धमा लुकेको छ। यो मान्छे को माध्यम ले यो हेर्न को लागी र राष्ट्रवादी गर्व या धार्मिक दोष को कुनै रूप को रूप मा राख्न को लागी छ, या कुनै दर मा कभी नहीं, कभी हतियार उठाए जाने कारण। त्यो वास्तवमा तिनीहरूले के चाहन्छन्। और यदि तपाईं विश्वास छैन कि त्यहाँ एक शत्रु छ, तिनीहरू बिग्र आतंक हुनेछ।
यदि हामीले उचित तरिकाले यो विश्लेषण गर्छौं, हामी पत्ता लगाउँछौं कि हामी सधैं पश्चिमी रोमन साम्राज्य र पूर्वी रोमन साम्राज्यको बीचमा युद्ध देख्छौं। तुर्क साम्राज्य अब शुरू र पश्चिमी रोमन साम्राज्य को छेउमा लड्न सक्छ। यद्यपि मीडियामा राजनीतिक पछाडि प्रभाव पार्नु पर्छ कि अमेरिका, यूरोप र टर्की बीचको एकतामा कुनै प्रश्न छैन, यो मात्र लिम्बुमा राख्नु हो। पूर्वी रोमन साम्राज्य रूस, ग्रीस, सर्बिया, सीरिया, ईरान, चीन र यससँग सम्बन्धित सबै चीजहरू। पश्चिम (आत्म-निर्मित) सनी इस्लाम द्वारा समर्थित छ र पूर्वी शिई इस्लाम (स्वयं निर्मित) द्वारा समर्थित छ। Ordo ab Chao! नयाँ विश्व अर्डर एउटै पुरानो फराओनिक विश्व अर्डर हो। तिनीहरूको उद्देश्य के हो: जितनी सम्भावित रगत, पीडित बलिदान र दासत्व।
यसैले अर्गोल्फ हिटलरको दृष्टान्तको रूपमा चित्रण गरिएको छ जसको तस्विरले मूर्ख बनाउँदैन। हामी पनि पुतिन चित्रण गर्न सक्छौं। हामी पनि यस्तो तरिकामा ओबामा चित्रण गर्न सक्दछौं। अनि हामी यस तरिकाले विलियम अलेक्जेंडरलाई चित्रण गर्न सक्दछौं। तिनीहरू सबै कलाकार हुन्! तपाईं नसोर्सनु हुँदैन किनकि तपाईंको राष्ट्रीयता वा धर्मलाई चोट लागेको छ। तपाईं आफ्नो नेताहरूमा रिस उठाउनु पर्छ जसले तपाईंको आँखा बन्द गर्नेछ र तपाईं राष्ट्रवादीको साथमा नर्सन भावनाहरु जो स्वेच्छाले युद्धमा तिनीहरू सबै ती इच्छुक मूर्ख पाला जाए दास सबै यो रक्तपात देखि आफ्नो महलों र ऊर्जा आफूलाई squander प्राप्त गर्दा दास गर्न प्रोग्राम।
स्रोत लिङ्क सूची: विकिपीडियामा
ओर्गेगान फेरि फेरि युरोपमा शरणार्थ्यको ढोका खोल्न धम्क्याउँछ
के हुनेछ उर्दूले अक्टोबरमा युरोपमा कार्य सुरु गर्ने?
ट्याग: Erdogan, युरोप, विशेष, हिटलर, नाजुक
12 मार्च 2016 मा 00: 05
शीर्ष लेख। यसले सबै कुराहरु जोड्छ ...... अब मानवताको जागरण!
12 मार्च 2016 मा 10: 38
हामी टर्की पाठक Ergün Poyraz गरेर पुस्तक पढ्न को लागि (Musa'nin çocuklari (मोशाको बच्चाहरु), कसैले गर्ने Erdogan परिवारको पृष्ठभूमिबाट अनुसन्धान गरेको छ 'Tayyip Emine हूँ। दुवै पुरुष र महिला, Ergün Poyraz गरेको कुनै पनि चीजको लागि केहि छैन टर्कीले गहिरो राज्य (डिपिन भक्ति) को निर्माण गर्ने क्रिप्टो यहूदीहरूलाई सधैं समस्या छ।
12 मार्च 2016 मा 11: 21
@ मार्टिन, यासिन अल कदी (मतलब न्यायाधीश) अमेरिका / इजरायल र सऊदी अरब बीचको (वित्तीय) सम्बन्ध हो। PTech>> 9-11 कम्पनी हेर्नुहोस्
4 जनवरी 2018 मा 08: 36
नाजुक मशरूम जस्तै उज्यालो छ, मध्य एशियामा जेनरोलिक गठबन्धनबाट आकृतिहरू पहिले नै एशिया र मध्य एशियासँग देखा पर्छन्।
« के येशू एक फिरऊन सन्तान हुनुहुन्थ्यो; के शाही परिवारहरू फिरऊन सन्तान हुन्?
शरणार्थियों को सहायता को द्वारा नीदरल्याण्ड मा गरीबी मा अनुसन्धान »
कुल भ्रमण: 14.046.014